Uhluzo lomoya lwepokotho yeendaba
Ifektri yokuthengisa ngokuthe ngqo ubungakanani obungacwangciswanga bokucoca ulwelo lwezinto eziphathekayo Uluhlu lweeMveliso: Iipokotho zokucoca ngokuphakathi okuphakathi kweF5 ~ F8 yenzelwe uluhlu olubanzi lomoya kunye nokusetyenziswa komoya ngokubanzi apho imithamo emikhulu yomoya kufuneka iphathwe kunye neenkqubo ezifuna ukuphakama umthamo wokubamba uthuli kunye nokumelana okuphantsi. Isetyenziswa ngokubanzi kuzo zonke iintlobo zeefilitha zepokotho, izihluzi zebhegi, izinto zangaphambili zeHVAC kunye neenkqubo zokungenisa umoya. 1. Imidiya: ifayibha yokwenziwa 2. I-Efficie ...
Ekuqaleni (ngokwe) air filter cotton
Izinto eziluncedo: * Ukucocwa * Ukuxhathisa okuphantsi * Ixesha lokusetyenziswa kwexesha elide * Umgangatho omkhulu wokubamba uthuli Ukucaciswa: * Umbala: umhlophe * Ububanzi: 1m okanye 1.2m * Ukutyeba: 3mm, 5mm, 10mm, 15mm, 20mm (Ingenziwa ngokwezifiso ngokweemfuno zabathengi) * EN 799 iklasi: G2 (mhlophe, mnyama) * EN 779 inqanaba: G3 (luhlaza), G4 (luhlaza namhlophe) * Umndilili wokubanjwa: G2: (50-60)%, G3: (60-80)%, G4 : (80-92)% * Ukuxhathisa kokuqala: G2: (20-25Pa), G3: (30-45Pa), G4: (40-50Pa) * Itheminali yokumelana: 150Pa * Amandla: 350-550g / ...
Uphawu: Isetyenziswa ngokubanzi, hayi kuphela umoya, kodwa ukuhluza kunye dedusting ezinye imingxunya, ezifana kwimeko yekhompyutha, nto leyo iba nefuthe elungileyo dedusting ngaphandle kokuchaphazela umoya omkhulu isihluzo umoya umthamo. Ingasetyenziselwa njengesikrini sefestile, kwaye umphumo ungcono kunesikrini somiyane jikelele. Iyahlala, kulula ukuyicoca, okoko nje uhlamba ngamanzi. Ingasetyenziselwa ukuphindaphinda ngaphandle kokutshintsha. Uphawu: Isetyenziswa ngokubanzi, hayi kuphela imeko yomoya, ...